ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ၂၂ ဦးမြောက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမ်မရန်ခန်း ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆို - Yangon Media Group
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ၂၂ ဦးမြောက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမ်မရန်ခန်း ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆို
အစ္စလာမ္မာဘတ်၊ သြဂုတ် ၁၉
ခရစ်ကက် အားကစားသမား ဘဝမှ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူ အမ်မရန်ခန်းသည် လွှတ် တော်မှ အတည်ပြုပြီးနောက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ၂၂ ဦးမြောက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် သြဂုတ် ၁၈ ရက်က အစ္စလာမ္မာဘတ်မြို့တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်ဟု သြဂုတ် ၁၉ ရက် သတင်းများအရ သိရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားသို့ သမ္မတမန် နွန်းဟူစိန်၊ ယာယီဝန်ကြီးချုပ် နာဆာ အူးလ်မာ့ခ်ျဇ်၊ ခန်း၏ဇနီးသည် ဘာရှာ၊ လွှတ်တော်အမတ်များ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ သံတမန်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများလည်း တက်ရောက် ကြသည်။
ပါကစ္စတန် အမျိုးသားဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော အင်မရာခန်း သမ္မတရုံးခန်းသို့ ဝင်လာသည်နှင့် နိုင်ငံတော်တီးဝိုင်းက ပါကစ္စတန် အမျိုးသားသီချင်းကို တီးမှုတ်ကြို ဆိုခဲ့သည်။ အမ်ပရာခန်း၏ Tehreeke- insaf ခေါ် တရားမျှတမှုပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် အများအပြား၌ အနိုင်ရရှိခဲ့သော ပါတီ ဖြစ်သည်။
ဥာဏ်ရည်အဆင့် ၁၇၁ ရှိ သုံးနှစ်သမီးတစ်ဦး ယူကေ၌ ပေါ်ထွက်
ဒေါ်လာဈေး ဆက်လက် ကျဆင်းနိုင်ဟု ငွေကြေး ကျွမ်းကျင်သူများခန့်မှန်း
မိမိ၏ လုပ်ဆောင်ချက် ရွေးကောက်ပွဲများ ဥပဒေနှင့် မညီပါက သေဒဏ်အထိ ပေးနိုင်ကြောင်း ကော်မရှင် ဥ?
သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကနေ ဘယ်တော့မှ နုတ်ထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး – ကိတ်ဝင်းစလက်
နတ်ပေါက် ဆင်စခန်း လာရောက်သည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသည်များ အဆင်ပြေစေရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်
သံဃနာယက အဖွဲ့၏ သြဝါဒကို မခံယူပါက သံဃာ့ဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့် ဦးဝီရသူကို တရားစွဲဆိုမည်
ထရန့်နှင့် ကင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပေါ် အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ပညာရှင်များ ချီးကျူး??